Wholesale B635A Shaping mahcine Manufacturer uye Supplier |Lu Young
Diki CNC Lathe Machine
Pakati CNC Lathe Machine
Lathe uye Milling Combo
Flat Bed Lathe Uye Milling Combo
Slant Bed Lathe Uye Milling Combo
B635A Kugadzira mahcine
Iyo tafura yekushanda yebhururu musoro planer inogona kutenderera kuruboshwe nekurudyi, uye tafura yekushanda ine yakachinjika uye yakatwasuka inokurumidza kufamba michina;inoshandiswa kuronga ndege dzakarerekera, nokudaro dzichiwedzera chiyero chekushandiswa.
Bullhead planer iplaneer inoita linear reciprocating motion.Gondohwe rinotakura mupurani.Iro rakapiwa zita nokuti chinobata chisvo chiri pamberi pegondohwe chinoita somusoro wenzombe.Bullhead planers anonyanya kushandiswa kune madiki uye epakati-saizi mabhuru anoronga.Mazhinji ekufamba kukuru kwebullhead planer kunofambiswa necrank-rocker mechanism, saka kumhanya kwegondohwe hakuna kuenzana.
1. The worktable of the bullhead planer inogona kutenderera kuruboshwe nekurudyi, uye worktable ine yakatwasuka uye yakatwasuka inokurumidza kufamba mashandiro;inoshandiswa kuronga ndege dzakarerekera, nokudaro dzichiwedzera chiyero chekushandiswa.
2. Chikafu chekudya cheplaner chinotora cam mechanism ine mazinga gumi ekudya.Izvo zvakare zviri nyore kwazvo kushandura huwandu hwebanga.
3. Iyo bullhead planer yakashongedzerwa ine overload yekuchengetedza michina mukucheka system.Kana iyo yekucheka yaremerwa nekuda kwekushanda kusina hanya kana simba rekunze, mudziyo wekucheka unotsvedza woga, uye kushanda kwakajairika kwechishandiso chemuchina kunovimbiswa pasina kukuvara kune zvikamu.
4. Pakati pegondohwe nemutungamiri wemubhedha, pamwe chete negear pair nekukurumidza uye sliding guide surface, pane mafuta ekuzora kubva papombi yemafuta ekutenderera.
Lubrication system uye lubrication point nzvimbo mepu yebullhead planer
Iwo makuru anofambisa zvikamu zvemuchina chishandiso, senge gondohwe rekutungamira njanji, rocker mechanism, giya bhokisi, bhokisi rekudyisa, nezvimwewo, zvinoiswa pombi yemafuta, uye mafuta anopihwa anogona kugadziriswa sezvinodiwa.
Kana chishandiso chemuchina chatangwa, pombi yemafuta inotanga kushanda.Iyo pombi yemafuta inosveta mumafuta ekuzora kubva padziva remafuta epabhesi yemubhedha kuburikidza nesefa yemafuta, uye yopfuura nepainoparadzanisa oiri nemapaipi ekuzora chikamu chega chega chemuchina.
1. Kana danda richisimudzwa nekudzikiswa, screw yekuvhara inofanira kusunungurwa kutanga, uye screw inofanira kusimbiswa pakushanda.
2. Hazvibvumirwi kugadzirisa gondohwe chirwere panguva yekushanda kwechigadzirwa chemuchina.Paunenge uchigadzirisa kurova kwegondohwe, hazvibvumirwi kushandisa nzira yekubata kusunungura kana kuomesa mubato wekugadzirisa.
3. Kurova kwegondohwe hakufaniri kudarika muganhu wakatarwa.Kumhanya kwepamusoro hakubvumirwi kana uchishandisa sitiroko yakareba.
4. Kana iyo worktable iine simba kana kuzununguswa neruoko, teerera kune muganhu we screw stroke kudzivirira screw uye nati kubva pakubvisa kana kukuvadzwa kumushini wemuchina.
Hurefu hwekucheka hurefu(mm)
Chinhambwe chikuru kubva pagondohwe kuzasi kusvika patafura (mm)
Yepamusoro tafura yakachinjika kufamba(mm)
Yepamusoro tafura yakatwasuka kufamba(mm)
Inotungamira pamusoro pemupurani kuenda kunorara kunze kwechinhambwe chikuru
Iyo yakanyanya kutamiswa kwegondohwe
Maximum turning angle yeiyo worktable (hapana vice)
Maximum turning angle yebasa rekushanda (vice)
The turret Maximum vertical travel
Nhamba yemakondohwe ekurohwa paminiti
32, 50, 80, 125, nguva min
Gondohwe richidzoka neshure chiyero chekudya chetafura
Wheeled kutenderedza zino (yakatwasuka)
Wheeled kutenderedza zino (horizontal)
Wheeled round 4 zino (yakatwasuka)
Wheeled round 4 zino (horizontal)
Zvakapfuura: CD6241 Manual lathe
Zvinotevera: BK5030 cnc vertical Slotting muchina wesimbi
C6140/C6240 gap mubhedha simbi centre lathe muchina
ck0640 Mini simbi gang mhando mudziyo inobata muchina...
CK6432 china yemakwikwi mutengo cnc yekucheka lath ...
CK61100 sandara mubhedha horizontal simbi muchina hombe t ...
vmc1370 high speed 3 axis cnc simbi yekugaya mac ...
BC6085 Fekitari mutengo wekugadzira muchina chishandiso ne ...
Customized configuration, kutaridzika kunowanikwa